merolagani - भारी हकप्रद पूँजीकरण गरेर अघिल्लाे वर्षकै पूँजीमा इपिएस गणना !
भारी हकप्रद पूँजीकरण गरेर अघिल्लाे वर्षकै पूँजीमा इपिएस गणना !
Aug 07, 2018 Merolagani
लगानीकर्तालार्इ सूचीकृत कम्पनीले कसरी छक्याउँछन् भन्ने उदाहरण कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक (KRBL) ले प्रस्तुत गरेकाे छ । बैंकले मंगलबार सार्वजानिक गरेको वित्तीय विवरणमा २२५% हकप्रद पूँजीकरण गरेर अघिल्लाे बर्ष कै (१५ करोड १० लाख) चुक्ता पूँजीमा प्रतिसेयर आम्दानी गणना गरेर ६ रुपैयाँ ७६ पैसा देखाएको छ ।
अघिल्लाे बर्षकाे भन्दा नाफा घटेपछि बैंकले चलाखी गरेर प्रतिसेयर अाम्दानी ४ रूपैयाँ ७३ पैसा बढी देखाएकाे छ । तर बैंकले सार्वजनिक गरेकाे वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वास्तविक इपिएस भने दुई रुपैयाँ तीन पैसा हुन अाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गर्न बैंकले गत माघ ११ देखि चैत १ गतेसम्म २२५ प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेको थियाे । तर आफ्नो खुद नाफा अधिल्लाे बर्षभन्दा २९ लाख रुपैयाँले खुद नाफा घटेपछि बैंकले बठ्याँइ पूर्वक पूरानो पूँजी मै इपिएस गणना गरेर लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना गर्न खाेजेकाे छ ।
हकप्रद बिक्रीको पूँजी लगानी गरेर आम्दानी गर्न छाडेर बैंक पैसा थुपारेर बसेको देखिन्छ । बैंकको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा देखिएको सुस्त वृद्धि र कर्जा निक्षेप अनुपात ४८.७१ प्रतिशत रहनुले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । व्यवसाय वृद्धिमा बैंक व्यवस्थापन असफल देखिएको छ । जसले बैंककाे प्रगति पछाडि फर्किएकाे छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक करोड ३१ लाख गरेको बैंकको खुद नाफा १ करोड २ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जगेडा कोष पनि तीन करोड ९६ लाखमा घटेको छ ।
बैंकले चुक्ता पूँजी १५ करोड १० लाख रुपैयाँबाट ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस अवधिमा बैंकले २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैंककाे खुद व्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेकोमा यस अवधिमा ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।
निष्कृय कर्जा अनुपात २.२७ प्रतिशतबाट ३.३६ प्रतिशतमा बढ्दा २४ लाखको नोक्सानी व्यवस्था ७२ लाखमा पुगेको छ । कर्मचारी खर्च र अन्य खर्चले बैंकको सञ्चालन नाफा २२ प्रतिशतले घटेर एक करोड ६० लाखमा झरेको छ । अघिल्लो बर्ष बैंकले दुर्इ अर्ब ६ करोड सञ्चालन नाफा कमाएको थियो ।
बैंकको निक्षेप लागत ७.३५ प्रतितश, र प्रति शेयर नेटवर्थ १०७.८८ रुपैयाँ रहेको छ ।
पूर्णिमा विकास बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी आधा घट्यो
देव: विकास बैंकमा विलिन हुन लागेको वेस्टर्न डेभलपेमन्टको यस्तो छ अवस्था
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले जगेडा दोब्बर पार्दा कति बढायो खुद नाफा ?
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा घट्यो
ओम डेभलपमेण्ट बैंकको जगेडा कोष बाहेक अन्य प्रगति समान्य
कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा रूपान्तरण हुन पत्राचार गर्ने भएको छ। भदौको पहिलो साता उनीहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।